တစ္ဆေအကြောင်း – Myanmar Live
တစ္ဆေအကြောင်း / လူနေမှုပုံစံ
ငါ့ကိုသတိမရဘူးလား ! ငါကနင့်ရဲ့အမလေ…
ကျွန်မမွေးခင်ကတည်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်မအမေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ကာလကပေါ့ ၆-၇ လလောက်တော့ရှိပြီ ကံဆိုးစွာနဲ့ကိုယ်ဝန်ပျက် ကျသွားခဲ့တယ်။နောက်နေ့ကျတော့ အမေသွေးတအားဆင်းတော့ …
April 3, 2020 April 3, 2020 - by peeraporn y.
မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ တနေ့ကျနော် အလုပ်လွှတ်တော့ အချိန်က ည ၈ နာရီလောက်ရှိပြီ ကျနော်လည်းရေမိုးချိုးပြီး တီဗီထိုင်ကြည့်နေတာပေါ့ ခဏကြာတော့ …
March 26, 2020 March 26, 2020 - by peeraporn y.
ကျနော်ကျောင်းတက်တုန်းကဖြစ်ရပ်တခုပါ နေ့တိုင်းလိုလို ကျနော်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်မပြန်ခင် ဈေးမှာ ထမင်းသွားစားလေ့ရှိပါတယ် ကျနော့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ချစ်သူတွေလည်းလာစားကြပါတယ် ကျနော့မှာ Beer …
March 19, 2020 March 19, 2020 - by peeraporn y.
ကျနော်လိုင်းကားမောင်းခါစတုန်းလောက်ကပေါ့ ဘန်ကောက်ကနေ မဲ့ဆောက်ကိုပြေးဆွဲတဲ့ ခရီးစဉ်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ၅ ဦးနဲ့မဲ့ဆောက်ကိုသွားတော့ ကျနော့ရဲ့ဘေးမှာ တစ်ယောက်ထိုင်တယ် ကျနော့ရဲ့အနောက်ခုံတန်းမှာ …
ကျနော်နဲ့ကျနော့်သူငယ်ချင်း ၉ တန်းတုန်းကအိမ်ပြန်ဖို့ကားစောင့်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ ကျနော်တို့ကားရပ်စောင့် နေတဲ့ကားဂိတ်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်က ကျနော်တို့ဘက်ကိုသွားတဲ့ကားပြာကြီးကအရှိန်မထိမ်းနိုင် ဘဲ …
ကျမကစာတိုက်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ သန့်ရှင်းရေးအလုပ်သမားတစ်ယောက်ပါ အလုပ်ဝင်ခါစ တော့သူများတွေက အပေါ်ထပ်အိမ်သာထဲမှာ လူသေဖူးတယ်လို့ပြောပြကြပါတယ် တချို့သူတွေကလည်း အိမ်သာဝင်ရင် သရဲခြောက်ခံရတာတို့ ဘေးအိမ်သာကလူမရှိဘဲ …
February 21, 2020 February 21, 2020 - by peeraporn y.
တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းက ဘူရီရမ်မြို့ကကျမသူငယ်ချင်းက မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်လို့ ဘန်ကောက်ကနေ ကားမောင်း သွားခဲ့ပါတယ် ပြန်လာတော့ညနေစောင်းနေပါပြီ ကားပေါ်မှာကျအမေနဲ့မောင်လေးလည်းလိုက်ပါလာပါတယ်။ ကားမောင်းလာတာအတော်ကြာပါပြီ လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရှိပြီ …
Thailand 101 / ကျန်းမာရေး / တစ္ဆေအကြောင်း / ထိုင်း / လူနေမှုပုံစံ / သတင်းများ / အစားအစာ / အလုပ်သမားရေးရာသတင်း / အိုင်တီ
‘Thailand 101’ လက်စွဲစာစောင်ထဲမှာဘာတွေပါလဲ နာမကျန်းဖြစ်ကြတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?
February 20, 2020 February 20, 2020 - by K.Khongsub
ငွေရှာဖို့အရေးကြီးပါတယ် သို့သော်ငွေရှာနိုင်ဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ် ဒီအတွက် ကြောင့်လည်း Myanmar Live မှထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေသိသင့်သိထိုက်တဲ့အရာတွေကို စုစည်းထားတဲ့ Thailand …
February 14, 2020 February 14, 2020 - by peeraporn y.
ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲက စနေနေ့တစ်နေ့မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ အမေနဲ့ခင်မင်တဲ့ ကြီးမယ်ရဲ့မွေးနေ့လည်းဟုတ်ပါတယ်။ ခါတိုင်းနှစ်တွေမှာ အမေကိုယ်တိုင် အိမ်တိုင်ရာရောက် မွေးနေ့ လက်ဆောင်သွားပေးတတ်ပါတယ်။ …
February 7, 2020 February 7, 2020 - by peeraporn y.
၂ဝဝ၅ ခုနှစ်လောက်ကအလုပ်ရုံတစ်ခုမှာ ကျနော်စက်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် ကျနော်က ပစ္စည်းအဟောင်းတွေ ရှာဖွေစုဆောင်းရတာ ဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ပါ။ တစ်နေ့ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီကအလည်အပတ်ခရီးစဉ် စီစဉ်တာကြောင့် ကျနော့်ရဲ့ဇနီးကိုပါခေါ်ပြီး …